Candidate Filing Opens for May 18, 2021 Special District Election - Somali | Multnomah County
Diiwaan Gelinta Musharaxiinta Waxay bilaabantay Maanta oo Isniin ah, Febraayo 8, 2021 doorashada Degmooyinka Gaarka ah ee 18-ka Maayo, 2021.
Doorashada xigta ee Degmada Multnomah waa Doorashada Degmooyinka Gaarka ah ee bisha Maajo 18, 2021. Doorashadan waxaa ka mid ah loolanka loogu jiro jagooyinka guddiga dugsiga xaafaddaada, kulliyadda bulshada, adeegga waxbarashada degmada, adeegga dabdamiska degmada ee miyiga iyo adeegga biyaha degmada. Iyadea oo ku xidhan goobta aad ku nooshahay, waxaad ka heli kartaa mid ama in ka badan oo kamid ah tartamadaan codbixintaada.
Waraaqaha codbixinta waxaa loo diri doonaa boosta dhammaan cod-bixiyeyaasha ka diiwaangashan Degmada Multnomah laga bilaabo Arbacada, Abriil 28. Waa muhiim inaad hubiso inaad ka diiwaan gashan tahay si aad u codeyso oo diiwaan-gelintaadu sii socoto si aad u hesho warqaddaada codbixinta sida ugu dhakhsaha badan.
Dhismaha Doorashooyinka Duniway-Lovejoy ee Degmada Multnomah (1040 SE Morrison St, Portland) wuxuu u furan yahay dadweynaha bilawga maanta, Isniinta, Febraayo 8, 2021, si loo calaamadiyo bilowga muddada xareynta musharraxiinta ee doorashadan. Saacadaha shaqada xafiiska 8 a.m. - 5 p.m., Isniin - Jimce. Haddii aad xiisaynayso inaad u tartanto xafiiska waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah khadka tooska ah ee internetka: mcelections.org, ama adiga oo taleefankan nagula soo xidhiidhay 503-988-8683 ama fariin iimayl ah nogu soo dir elections@multco.us.
Doorashada Degmada Multnomah waxay raacaysaa dhamaan talooyinka fayodhawrka ee ay bixisay Xarunta Kahortaga iyo Xakamaynta Xanuunku (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) oo ay ku jiraan xidhashada maaskarada wajiga iyo tilmaamaha kala fogaanshaha. Cod bixiyayaal badani waxay sidoo kale ku buuxin karaan khadka tooska ah ee online ka.
Cod bixiye ahaan, waxaad u diyaar garoobi kartaa Doorashada Degmooyinka Gaarka ah ee Maajo 18, 2021 adoo dejiya qorshe aad ku codeyso.
Doorashada dawladaha hoose waa muhiim. Samayso qorshe si aad u codayso doorashada bisha Maayo!
Kahor waqtiga kama-dambaysta ah ee Maalinta Doorashada ee 18-ka Maajo, Doorashooyinka Degmada Multnomah waxay weydiisaneysaa cod-bixiyeyaasha inay Sameeyaan Qorshe ay ku CODEEYAAN! Liiska diiradda la saaray ee codeeyayaasha waxay marayaan shan laabo si loo xaqiijiyo in codkooda la tiriyay:
Doorashada dawladaha hoose waa muhiim. Hubi codkaaga in la tiriyay!
Marka kowaad - Is Diiwaan geli si aad u CODAYSO. Wakhtiga kama danbaysta ah ee isdwaangalinta codbixintu waa Abriil 27, 2021.
Waqtiga kama dambaysta ah ee diiwaangelinta cod-bixiyeyaasha ee doorashadan waa Talaado, Abriil 27. Isku duwaan geli inaad ku codaynso online ahaan oregonvotes.gov/register. Hubso inaad cusboonaysiiso diiwaangelintaada cod-bixinta wakhti kasta oo aad dhaqdhaqaad samayso ama guurto, magacaaga beddesho, ama aad rabto inaad beddesho ka mid ahaanshaha xisbigaaga. Waxa la gaadhay iminka wakhtigii la hubin lahaa inaad iskugu duwaan gelisay codaynta meesha aad iminka degan tahay iyo cinwaanka saxda ah. Markaa, isku duwaan geli La Socodka Warqadaada Codaynta marka aad eegto isduwaan gelintaada.
Waxaad ku heli doontaa warqaddaada codbixinta boostada bilawga Abriil 28. Haddii aad ka maqnaan doontid guriga xiliga doorashadan waad isdiiwaangalin kartaa si aad u hesho warqadda codbixinta maqnaanshaha, oo la heli karo bilawga Abriil 5, 2021.
Ku CODEE warqadaada codaynta.
Xasuuso inaad saxeexdo bushqada warqada codaynta lagu soo celinayo. Saxeexaagu ayaa ah aqoonsigaaga. Saxeex kasta oo warqad kasta waa la eegi doonaa si loo xaqiijiyo inuu lamid yahay saxeexa ku yaala duwaanka’codeeyaha. Hadii aad ilawdo inaad saxeexdo ama saxeexaagu ay is yeelan waayaan waxa aanu kuu soo diri doonaa warqad oo waxa aanu kugula soo xidhiidhi doonaa La Socodka Warqadaada Codaynta si aad talaabo u qaadi karto oo codkaaga loo tiriyo.
Waxaad haysataa laba dookh oo kale ah soo celinta warqadaada codaynta. Hore u codee oo soo celi warqadaada codaynta. Shaambad looma baahna! Codbixintaada waxaan nagaga heli doontaa Boostada Maalin Salaaso ah, Maajo 11 si aad u hubiso in xafiiskayagu ku helay wakhtigii loo baahnaa. Lama tirinayo tigidhka boosta Oregon.
Waxa aad sidoo kale warqadaada codbixinta keeni kartaa oo aad ku ridi kartaa Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah. Waxaad keentaa warqadaada codaynta Sanduuqyada Goobaha Codaynta Rasmiga ah wakhti kasta oo ka mid ah
24 saacadood ama Sanduuqa Laybareeriga Degmada Multnomah wakhti kasta oo ka mid ah 24 saacadood. Dhamaan Sanduuqyada Goobaha Codaynta Degmada Multnomah ee Rasmiga ah waxa ay ku jiraan multco.us/dropsites. Waraaqaha codbixinta waa in la helaa 8da fiidnimo. Habeenkii Doorashada, Maajo 18, 2021.
Ka qeybgalka codbixiyaasha ee Doorashada Guud ee Noofambar 2020 waxay gaareen nambarada rikoorka loo baahnaa. Doorasho kasta waa muhiim, doorashada dhacaysa bisha Maayo 18, 2021 ee ah Doorashada Gaarka ah waa fursad kale oo aad codkaaga haysato. Doorashooyinka golaha deegaanku waxay saameeyaan go'aan gaarista maxalliga ah ee dhammaan degmooyinkeena gaarka ah!
Tir maalmaha ka hadhay maalinta doorashad ee ku beegan bisha Maayo 18:
Muddada Xereynta Musharraxinimada waxay Furmaysaa - Febraayo 8, 2021
Mudada Xeraynta musharaxnimada waxay xidhmaysaa 5 p.m. -
bisha Maarij 18, 2021
Buug-yaraha Cod-bixiyeyaasha waxa loo diray dhammaan qoysaska deggan - Abriil 21, 2021
Wakhtiga kama danbaysta ah ee is diwaangalinta codbixintu waa -
Abriil 27, 2021
Xarunta Codbixinta Gresham Ayaa Furmaysa - Maayo 3, 2021
Dhamaan codeeyayaashu waa inay helaan waraaqahooda codaynta. Bisha Maayo 6, 2021
Maalinta u dambeysa inaad si ammaan ah ugu soo celinayso warqadda cod-bixintaada boostada - waa Maayo 11, 2021
Maalinta Doorashada - Kaadhadhka codbixinta waxa u danbaysa 8 da fiidnimo ee bisha Maayo 18, 2021
Natiijooyinka doorashada kama dambaysta ah waxaa loo sharciyaynayaa degmooyinka gaarka ah - Juun 7, 2021
Dhismaha Doorashada Duniway-Lovejoy Degmada Multnomah